वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए हृदयघातबाट बच्ने उपाय – राजधानी खबर
वैज्ञानिकहरुले कुन व्यक्तिलाई हृदयघात हुन सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने तरिका पत्ता लगाएको बताएका छन् । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरुले यो अध्ययनबाट मृत्युको सबैभन्दा ठुलो कारणमध्ये एक हृदयघातको उपचारमा निकै सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
यो नयाँ तरिकाबाट धमनीहरुको चारैतिर मोटोपन र सुजन पत्ता लगाउन सहज हुनेछ । समयमै यो थाहा पाउनु जरुरी छ।
यसको माध्यमबाट उच्च जोखिममा रहेका विरामीलाई स्ट्रोक वा हृदयघातबाट बचाउनका लागि इन्टेन्सिभ ट्रीटमेन्ट दिन सहयोग पुग्नेछ ।
अध्ययनकर्ताहरु हृदयमा रोगमा सुजनको भूमिकामाथि अध्ययन गरिरहेका थिए ।शरीरभित्र हुने सुजनको सबैभन्दा ठुलो कारण रगतको कोशिकाहरुमा कयौ ससाना टुक्रा एकत्रित हुनु हो । यो टुक्रा पछि फुट्छन् र कारोनरी धमनीलाई ब्लक गरिदिन्छन् । जसका कारण मुटुसम्म अक्सिजन पुग्न सक्दैन । यही हृदयघात हो ।
अध्ययन टोलीमा संलग्न प्रोफेसर चारालन्बोस एन्टाँनियाडेस भन्छन्–करोनरी धमनिीहरुमा हुने सुजन पत्ता लगाउन विगत ५० वर्षदेखि चुनौ ितबनेको थियो ।
साइन्स ट्रान्सलेशन मेडिसनमा प्रकाशित अध्ययनको निष्कर्षअनुसार रगतको शिराहरुको बाहिर रहेको फ्याटको आधारमा सुजनमा परिवर्तन हुन्छ । जब सुजन बढ्दछ तब फ्याट टुक्रामा बाँडिन थाल्दछ र आसपासका टिश्यु बढी गिलो हुन लाग्दछ ।
मुटुसम्बन्धी रोगको जाँचका लागि पहिलादेखि प्रयोगमा ल्याइएको सिटी स्क्यानको माध्यमबाट पनि यो पत्ता लगायन सकिन्छ । कुनै पनि टिश्यु जति बढी रातो हुन्छ, सुजनको स्तर पनि त्यति नै बढ्छ र हुदयघातको खतरा पनि बढ्छ ।
अध्ययनबाट यो पनि स्पष्ट भएको छ कि जसले कार्डियक सर्जरी गराइरहेका छन्, उनीहरुमा ती परिवर्तनहरु पनि थाहा पाउन सकिन्छ । अध्ययन टिमका अनुसार जाँचको मुख्य कोर्स यो वर्षको अन्त्यसम्म आउनेछ । टिमले करिब २ हजार मुटु स्क्यान गरेर यो पत्ता लगाउने छ कि स्वस्थ देखिने मानिसमा हृदयघातको सम्भावना बताउने यो तरिका सफल हुनेछ ।
प्रो. एन्टाँनियाडेसले बीबीसी न्युजसँगको कुराकानीमा भने–यो प्रविधिबाट भविष्यमा कसलाई हृदयघात हुन सक्छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिने छ।
यसको सिधा अर्थ समय रहँदै रोगी सतर्क हुनेछन् र बच्ने तरिका पनि थाहा पाउनेछन् । उदाहरणका लागि स्वस्थ देखिने कुनै व्यक्ति हुदयरोगको सुरुवाती चरणमा छ र उसलाई कोलेस्ट्रोल कम गर्नु आवश्यक छ भने यो कुरा पहिला नै थाहा हुने छ।
प्रो.मेटिन एभकिरानले भने–यदि यो प्रविधि आफ्नो अहिलेसम्मको कुरामा अडिग रह्यो भने आगामी दिनमा हृदयघात वा स्ट्रोकजस्ता समस्यालाई समय रहँदै रोक्न सकिनेछ। एजेन्सी
‘दिपज्योती’ ट्रेलरमा सरोजको एक्सन अवतार
December 6, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on छुरा प्रहारबाट मृत्यु, अभियुक्तमध्ये एकजना पक्राउ
December 15, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on सुर्खेतमा किशोरी आमाहरु बढ्दै, ज्यान जोखिममा, किन बढिरहेछन् किशोरी आमा?
December 4, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on स्वास्थ्यमा मोटोपनबाट होइन, यस्ता कुराबाट सचेत रहनुस
प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने
जिन्दगीको पहिलो चुम्बनको बारेमा गायक सागर आलेले खोले यस्तो राज